Wakhti intee le eg ayaad ku bixisaa adeegsiga baraha bulshada? - BBC News Somali
Wakhti intee le eg ayaad ku bixisaa adeegsiga baraha bulshada?
Daraasad cusub ayaa lagu ogaaday in mudada ay dunida oo dhan dadku isticmaalaan baraha internet-ka ee bulshadu ku xidhiidhaa celclis ahaan kordhay ku dhowaad 60% todobadii sannadood ee u dambeeyey.
Xarun daraasaadka samaysa oo la yidhaa Global WebIndex ayaa soo bandhigtay xog laga helay 45 gobol oo ka mid ah kuwa internet-ka aadka loogu isticmaalo dunida, waxaana soo baxday qiyaas ah in dadka u go'ay adeegsiga barahaasi ay ka korodhay qiyaastii 90 daqiiqo maalintii oo ay ahaan jirta 2012 oo ay haatan gaadhay 143 daqiiqo saddexdii bilood ee ugu horeeyey 2019.
Waxa jira kala duwanaan heer gobol ah iyo dalalka qarkood ah. Latin America oo ah dadka ugu isticmaalka badan barahaas dunida, ayaa celcelis ahaan inta wakhtiga ay ku qaataan tahay 212 daqiiqo maalintii.
Gobolka isticmaalka dadkiisu ugu hooseeyo celcelis ahaa ayaa ah Woqooyiga Ameerika oo ah 116 daqiiqo maalintii.
Dalka Philppines ayaa dadkiisu noqdeen kuwa wakhtiga ugu badan ku bixiya barahaas 241 daqiiqo maalintii, halka dadka reer Japan maalintii isticmaalaan 45 daqiiqo.
Hoos u dhac
Laakiin malaha la yaabka ugu weyn ee ka soo baxay daraasadda lagu sameeyey 1.8 milyan ee qof oo ku nool 20 dal, waxa weeya in dadkaasi wakhtiga ay ku bixiyaan barahaasi aan waxba iska bedelin ama uu hoos u dhacay.
GlobalWebIndex waxay sheegtay in xogta ay heshay muujinayso in "dad badan oo internet-ka adeegsadaa ay haatan dhaadan yihiin wakhtiga ay shaashadaha eegayaan inta uu yahay."
"Dadka internet-ka adeegsadaa waxay haatan ku lumiyaan maalintii lix saacadood iyo dheeraad internet-ka, saddex meeloodow meel ka mid ah wakhtigaasina waxay gaar u tahay baraha bulshada" ayuu yidhi Chase Buckle oo ah maareeye ka tirsan xaruntaas oo BBC la hadlay.
Dalalka daraasaddaa laga sameeyey ayaa Thailand waxa uu ka noqday dalka uu hoos u dhaca ugu weyni ku yimid wakhtiga ay dadkiisu ku bixiyaan adeegsiga beraha bulshada.
Celcelis ahaa waxa uu hoos uga dhacay 194 daqiiqo waxaanu noqday 171 daqiiqo intii u dhaxaysay 2018 ilaa 2019.
Vietnam, ayaa wakhtiga adeegsiga baraha bulshadu hoos u dhacay 10 daqiiqo marka la barbar dhigo sannadkii hore.
Indonesia, Belgium, Ghana iyo Maraykanka ayaa sidoo kale uu ka muuqdaa hoos u dhac wayni laakiin dalalka daraasadda laga sameeyey badankooda ayaa ay kordhodhay mudada dadku ku bixiyaan adeegsiga baraha bulshada. Dalalka qaarkoodna aad ayaabu u kordhay.
Isticmaalka baraha bulshada ee dunida
Daqiiqadaha shaashadda la fiiriyo maalin kasta
Source: GlobalWebIndex, 2019
Celcelis ahaan qofka Shiinaha ahi waxa uu maalintii adeegsadaa baraha bulshada 139 daqiiqo, taas oo 19 daqiiqo ka badan sannadkii 2018.
Adeegsiga maalinlaha ah ee Sucuudiga ayaa kordhay 14 daqiiqo maalintiiba, halka dalka Turkigana uu kordhay 13 daqiiqo.
Uganda: Caro ka dhalatay canshuurta lagu soo rogay baraha bulshada
Baraha bulshada 'waxay kordhiyeen wehel la'aanta'
Korodhka wakhtiga dadku isticmaalaan baraha bulshada ayaad mooddaa in uu ku kooban yahay da' gaar ah oo ah dadka da'doodu tahay 15 ilaa 24 jir.
Waana dadka wakhtiga ugu badan maalintii ku lumiya adeegsiga baraha bulshada sida ay sheegtay daraasadda GlobalWebIndex oo muujisay in ay 180 daqiiqo maalintii adeegsanayeen sannadkii 2018.
Da' yarta ayaa ugu badan dal walba dadka adeegsada internet-ka, waana sababta ay u noqdeen dadka ugu badan ee dalalkaa daraasadda laga sameeyey "wakhtiga ugu badan ku bixiya adeegsiga baraha bulshada" sida ay muujisay daraasaddu.
Image caption Wakhtiyada la geliya isticmaalka baraha bulshada ayaa sare u kacday inta badan dalalka
Khubaradu waxay digniino ku sheegeen in xidhiidh ka dhexeey mudada badan ee la isticmaalo baraha bulshada iyo cudurrada dhimirka.
"Cilmi baadhisyo la sameeyey waxay muujiyeen in dadka muddo dheer adeegsada baraha bulshadu ay ka farxad yar yihiin dadka kale" ayey tidhi Ashley Williams oo ah kaaliye borofesoor oo ka tirsan kulliyadda ganacsiga ee jaamacadda Harvard.
"Adeegsiga xad dhaafka ah ee tiknoolajidu dhibaatooyin buu yeelan karaa, kuwa ugu darinina yihiin diiqadda, shilal gaadiid iyo xataa dhimasho" ayay intaa u dartay.
Halisaha jira waxaad moodda in ay sabab u yihiin isbedellada dabci ee dadka, in kasta oo Apps-ka xaddidada wakhtiga qofku adeegsado internet-ku ay haatan kordhayaan.
Image caption Dad ku istcmaalaya taleefoonadooda gudaha tareen magaalada Manilla
Daraasadda GlobalWebIndex waxay muujisay in dadka "aadka" u adeegsada baraha bulshadu ay aad suurto gal u tahay in ay isticmaalaan Apps-kaas, oo da' yartuna ku jiraan.
Soomaalida intooda badan ma waxay dhasheen 1-da Janaayo?
Qiyaastii 30% dadka adeegsada baraha bulshada ee ka qayb galay daraasadda GlobalWebIndex ee sheegay in ay adeegsadaan Apps-kaas ayaa waxay u badnaayeen dad da'doodu u dhaxayso 16-24 jir.
Dadka isticmaalaha baraha bulshada ayaa muddo lix saac k abdan ku qaato interneetka iyagoo saddex meelood meel wakhtigaas ka mid ah ay ku qaataan baraha bulshada
Chase Buckle,, GlobaWebIndex
Sidee ugu haboon?
Ma jirto "muddo cayiman" oo rasmi ah oo ay tahay in aanay dadku in ka badan adeegsan karin internet-ka.
Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa talo bixintii u horraysay ee arintan la xidhiidha soo saartay bishii Abriil ee sannadkii hore, talo bixintaas na waxay khusaysay oo loogu talo galay caruurta shan jirka ka yar.
Daraasad ay samaysay jaamacadda Pennsylvania oo la baahiyey bishii Diisember ayaa lagu ogaaday in hadii adeegsiga baraha bulshada lagu xaddido 30 daqiiqo maalintii, in ay taasi muujisay "hoos u dhac muuqda oo la xidhiidha dhibaatada diiqadda iyo is cidlaynta." waxaana daraasadda ka qayb galay 143 arday.
Laakiin khubarada qaarkood waxay rumaysan yihiin in arintu intaa ka kakantahay.
"Baraha bulshadu waa wax aad u kala duwan oo bixiya adeegyo door ah. Arintaas ayaana ka dhigaysa wax adag in saamaynta baraha bulshada loo qaato wax isku mid ah" ayuu yidhi Andy Pryzbylski oo ah dhakhart ku takhasusay cilmi nafsiga tijaabooyinka, kana hawl galaya mac-hadka internet-ka ee jaamacadda Oxford.